Vokatra SPL: Indostria Photovoltaic
Ny angovo azo avy amin'ny masoandro Photovoltaic dia azo amin'ny alàlan'ny fanovana ny tara-pahazavana ho lasa herinaratra amin'ny alàlan'ny teknolojia mifototra amin'ny vokatry ny photoelectric. Izy io dia karazana angovo azo havaozina, tsy mety ritra ary tsy mandoto izay azo vokarina amin'ny fametrahana manomboka amin'ny mpamokatra herinaratra kely ho an'ny fanjifana tena ka hatramin'ny zavamaniry fotovoltaika lehibe.
Na izany aza, ny famokarana ireny Solar Panels ireny dia dingan'ny fandaniam-bola, izay mampiasa angovo be dia be koa.
Manomboka amin'ny akora rehetra izany, izay raha ny eto amintsika dia fasika. Ny ankamaroan'ny takelaka amin'ny masoandro dia vita amin'ny silikone, izay singa lehibe amin'ny fasika amoron-dranomasina voajanahary. Misy betsaka ny silikone, ka io no singa faharoa misy eto an-tany. Na izany aza, ny famadihana ny fasika ho silika avo lenta dia misy vidiny lafo ary fizotry ny angovo. Ny silika madio madio dia novokarina avy amin'ny fasika quartz tao anaty lafaoro misy alika maripana tokoa.
Ny fasika quartz dia ahena miaraka amin'ny karbaona ao anaty lafaoro misy herinaratra amin'ny hafanana> 1900 ° C ho lasa silikonin'ny metalyurgie.
Noho izany, raha ny tena henjana dia ilaina eto amin'ity indostria ity ny fitakiana mangatsiaka. Ankoatry ny fampangatsiahana mahomby, ny kalitaon'ny rano dia zava-dehibe ihany koa satria ny fahalotoana dia hiteraka fanakanana amin'ny fantsom-panafody.
Amin'ny fomba fijery maharitra, ny fahamarinan-toeran'ny tilikambo fihenan-tseranana mihidy dia avo lavitra noho ny mpamadika hafanana lovia. Noho izany, SPL dia manolo-kevitra ihany koa ny Hybrid Cooler hanolo tanteraka ny tilikambo fisakafoanana misokatra amin'ny exchanger hafanana.
Ny toetra mampiavaka azy lehibe indrindra eo anelanelan'ny SPL Hybrid Cooler sy ny tilikambo fihenan'ny faritra mihidy ary ny tilikambo fanamafisam-peo hafa dia ny: fampiasana exchanger hafanana anatiny ny tilikambo fihenan'ny rano fisotro mangatsiaka ho an'ny fitaovana (ho an'ny rano anaty) sy ny rano mangatsiaka ho an'ny tilikambo mangatsiaka (rano ivelany) hiantohana izany fiampangana izany madio foana ny rano amin'ny fitaovana fanariana na fanamainana. Amin'izay dia tsy ilaina ny manadio tilikambo iray fotsiny fa tsy ny fantson-drano sy fitaovana fampangatsiahana rehetra.